११ वर्षको कलिलो उमेरमा नै सुत्केरी : अपत्यारिलो तर तितो यथार्थ (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
११ वर्षको कलिलो उमेरमा नै सुत्केरी : अपत्यारिलो तर तितो यथार्थ (भिडियो सहित)
२१ औ शताब्दीमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीले भगवान्को प्रतीक मानेको चन्द्रमामा मान्छेले पाइला टेकिसक्यो, मङ्गल ग्रह मान्छेको हत्केलामा छ। तर कस्तो विडम्बना। हामी कति दयनीय अवस्थामा छौं ? ११ वर्षीय बालिकाले बच्चा जन्माउदा माया र सद्भाव पाउनुको सट्टा छि छि र दुर दुरको गर्ने यो हाम्रो कस्तो समाज। नेपाली समाज यति डरलाग्दो गरी विकसित भइरहेको छ कि आजभोलि भनेर पनि साध्य छैन। सानोदेखि ठूलासम्म तलदेखि माथिसम्म र उच्चदखि निम्नसम्म हेप्ने चेप्ने र एकले अर्कोलाई कागती निमोठेजस्तै गरी निमोठ्ने चलन व्याप्त हुँदै गएको छ।
यो अन्धबिस्वासको भण्डारले नेपालमा अझै कतिलाई जीवन जिउन कठिन पार्ने हो कुन्नि ? संसार कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो तर नेपाली समाज भने अझै कुसंस्कारको अँध्यारोमा रुमलिरहको छ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका ४ मा एउटा झुप्रो घर छ। त्यहिँ झुप्रो घर भित्र निशास्सेर भए पनि बसेकी छिन् भावना बस्नेत। बुबा सधै रक्सिको तालमा हुन्छन्, आमा आफ्नै १० महिने सन्तान स्याहार्नु कि घरको कामकाज गर्नु, परिवारसँग भएर पनि एक्ली छिन् भावना। एक्लोपन नै उनको साथी।
एक्लोपन सँगै उनलाई साथ् दिन उनको काखमा दुई महिने बालिका छिन्। उमेरले भर्खर ११ वर्षकी भावना एक बालिकाकि आमा हुन्। २०६३ चैत १३ मा जन्मिएकी भावनाले २०७५ फागुन ७ गते माइतीकै छाप्रोमा छोरी पुर्णिमालाई जन्माएकी हुन्। स्वास्थ्य संस्थामा समेत नपुगी गाउकै केहि सुडेनीको सहयोगमा उनी आमा बनेकी थिइन्। आमा बन्दा उनको उमेर ११ वर्ष १० महिना २४ दिन मात्रै भएको थियो।
गर्भ रहेको ९ महिनामा घरमै सुत्केरी भएकी भावना र उनकी छोरी पूर्णिमाको अवस्था सामान्य रहे पनि उमेरका कारण दुवैको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको साथै भावनाको शरीर सुन्निएर ज्वरो आएको खबर सुनेपछि उनको हालखबर बुझ्न काठमाडौँ देखि बर्दिया पुगेका हामि सोध्दै खोज्दै उनको घर भए ठाउँसम्म पुग्यौ।
हामी भावनाको करिव करिव नजिक पुगेका रहेछौ तर उनको घर ठम्माउन नसकेर बाटोमा हिडिरहेका एक पुरुषलाई भावनाको घर कता हो भनेर सोध्यौ। उनले उ त्येही हो भनेर देखाइदिए।
जानेर उनी गर्भवती भएकी पनि होइनन्। ११ वर्षको कलिलो उमेर भनेको शारीरिक सम्पर्क भनेको के हो, गर्भवती हुनु के हो भन्ने पनि थाहा नहुने उमेर हो। गाउँकै सरस्वती आधारभूत विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्यनरत १४ वर्षीय नन्दबाहादुर रावतसँग उनको मित्रता घनिष्ट थियो। भावना र नन्दबाहादुर एकै कक्षा र एकै विद्यालयमा पढ्ने भएकोले उनीहरु एकअर्कासँग नजिक हुनपुगे। नन्दबाहादुरको सानैमा आमाबुबा बितेकोले उनी फुपुको घरमा बसेर पढ्थे। न आमाको भर न बुबाको डर नन्दबाहादुर उमेरले भावना भन्दा धेरै भएतापनि उनले भावनाको पछि भविष्य के होला भनेर सम्म सोचेनन्।
सहमतिमा होस् या ललाईफकाई गरेर केहीको प्रलोभनमा पारेर होस् नन्दबाहादुर र भावनाले गरेको गल्तीले अहिले भावना एक्लैले सजाए भोग्नु परेको छ। समाजमा छि र दुर दुर भएर बस्नु परेको छ। माया चाहिने बेलामा घृणा र तिरस्कार झेल्नु परेको छ। समाज त अलि पर कै भयो आफ्नै परिवारले समेत अहिले उनलाई अपहेलना गरिरहेका छन्।
तसर्थ तपाईहरुले पनि भावनाको अबको बाँकिको जीवन सुखमय बनाउन आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुहोला। नत्र भने यी बालिकाको जीवनमा भोलि केहि घटना घट्यो भने यसको प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा तपाईहरु पनि जिमेवार हुनुहुन्छ।
सक्नेले आर्थिक सहयोग नसक्नेले यो भिडियो सहयोगी मनसम्म पुर्याउनको लागि एक शेयर गरेर भए पनि भ्वानाको जीवनमा राहत पुराइदिनुहोला। हामि मार्फत सहयोग गर्न चाहानेले हाम्रो फेसबुक पेज पिएन्पिखबर डट कममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई अन्य भिडियो सहित भावना कै विषयमा थप अपडेट पनि दिनेछौ त्यसको लागि पिएनपी मिडियालाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला।